Ahh! Cleopatra!! Ilaah Queen The, Fircoon ugu dambeeya ee Masar iyo mid ka mid ah haweenka ugu quruxda badan ee taariikhda. Sidaas, waxaa had iyo jeer ahaa lama huraan in qof u socday si ay u horumariyaan kulan Afyare ah iyada oo ku saabsan. Oo halkan waa. Kulankaan ayaa booska by IGT waa classic ah iyo mid ka mid ah kulan booska ugu caansan ee waqtiga oo dhan. Waxaa sii daayay arrin dhawr sano ka dib, laakiin waxa ay weli u suurtagashay in ay qabtaan oo dhan Quraanka kuwa kulan booska cusub la sawiro ay sare iyo matoorada kulan ka mid ah ay u gaar ah. Sidaas, waxa ay ka dhigeysaa kulankii Afyare si loo jecel yahay? Sidee sidii ay ku hadhay on top ah muddo sanado ah oo dhan, kuwaas oo? Time si aad u ogaato.
International Game Technology ama IGT, sida ay tahay ka badan loo yaqaano, markii hore shirkad Maraykan ah ciyaaraha ku salaysan ee Las Vegas. Waxaa la og yahay abuurista kulan booska sida Diamonds Da Vinci, 100K Pyramid iwm.
Cleopatra waa booska aad u dhalaalaya iyo midabo. Tan iyo waxa ay ku saabsan Fircoon a, Afyare ayaa eegno distinctively Masaarida in ay. midab midabka golf ayaa run ahaantii si fiican u shaqeeyo. Waa nooc ka mid ah ka dhigaya kulankaan eegi boqor, iyo grand, xaq u sida uu u maleeyeen in uu noqdo. music soo jeeda ayaa sidoo kale waa wax wanaagsan oo daryaa in si fiican la theme. Bogaadin in IGT ay shaqo cajiib ah oo ku saabsan labada audio iyo muuqaallada.
Cleopatra leeyahay 5 duntu iyo 20 paylines. Afyare waa playable ka 20p a yar per wareejin si weyn 100 £ per Lataliyihii. kulanka saldhiga yar yahay dhinaca caajiso. Tani sababtoo ah ma jirto talaabo runtii wax badan ka socda waxa ku jira. Degenaansho ciyaarta ayaa meel u dhexeeyaa dhexdhexaad ah. Sida ku xusan kulan ee saldhiga ah waa kinda caajis iyo aad leedahay doonaa inay maraan badan oo kooxaha qalalan.
Laakiin taasi meesha wareeg gunno u iman. Oo waxaa ka buuxa xiiso rollicking. Gaar ah Cleopatra dhigeeysa free muuqdo. Ha daawato baxay waxa aad ayaa aad u hesho sida ugu badan 180 dhigeeysa free oo ay la socdaan 3x multiplier a. Waxa kale oo jira degtey calaamad kala firdhiso a 3 kuwaas oo ku duntu ku siiyo 15 dhigeeysa free. Waxa ugu fiican oo ku saabsan dhigeeysa waa xaqiiqda ah in dhigeeysa kuwan la retriggered karaa.
The Cleopatra calaamad sidoo kale calaamad u duurjoogta ah oo u dhaqmo sida bedelkiisa oo dhan calaamado kale marka laga reebo calaamad kala firdhiso ah.
Cleopatra Waa ciyaar xiiso booska xajiya aad marti muddo dheer ah. Laakiin kaliya ma in, waxa ay sidoo kale ku siinayaa qaar ka mid ah lacagbixinta weyn. Waxaa inta badan ma aha ka tagay in kale waxaad codsan kartaa in Afyare a. Sidaas, uun ka heli online iyo this mid siin wareejin ah. Waxaad u jecel doonaa.